China metal akụkụ imewe Manufacturer na Supplier | Meste
Imewe akụkụ imewe na-agụnye definition nke bughi udi, akụkụ, elu ziri ezi na keukwu n'ibu Njirimara, na n'ikpeazụ pụta drawings ikpeazụ akụkụ n'ichepụta.
A na-ejikarị akụkụ ígwè dị iche iche rụọ ọrụ dị iche iche. Metal akụkụ imewe bụ isi iyi nke metal akụkụ ndụ. Mestech na-enye ụdị nhazi akụkụ ọ bụla dị nkenke, nhazi nhazi na nhazi maka ihe nkwukọrịta, akụrụngwa ike ikuku, akụrụngwa ọgwụ na akụrụngwa eletriki.
Njirimara nke anụ ahụ na nke kemịkalụ, nha, ọdịdị, ojiji gburugburu na itinye akụkụ dị iche iche igwe dị gụnyere ma dịgasị iche iche, teknụzụ nhazi ha dịkwa ọtụtụ.
Iji rụọ ọrụ dị mma n'ichepụta akụkụ igwe, enwere ihe atọ dị mkpa anyị ga-emerịrị.
1. ojiji gburugburu nke akụkụ na ihe achọrọ maka akụkụ ahụ
(1). Nha chọrọ
(2). Ihe siri ike chọrọ
(3). Ihu ezi
(4). Anti corrosion chọrọ
(5). Ike chọrọ
(6). Ihe nchoro choro
(7). Nchọpụta eletriki na ọkụ chọrọ
(8). I choro ibu ibu
(9). Ductility chọrọ
Injinia na emebe
2. Họrọ ihe ndị dị mma n'ụzọ ziri ezi
Principleskpụrụ nke ịhọrọ ihe maka ịmepụta akụkụ ígwè bụ ndị a:
(1). izute arụmọrụ ahụ: ihe ahụ ga-enwerịrị ike ịchọta ihe a chọrọ maka ike, ike, ike, omume na ihe ngosi ndị ọzọ.
(2) processingrụ ọrụ nhazi dị mma: dị mfe ịhazi na mmepụta anụ, iji hụ na ọnụego dị elu, na iji mezuo atụmatụ achọrọ nke ziri ezi na arụmọrụ chọrọ.
(3) Economy: ọ nwere ike ịchọpụta nnukwu mmepụta na ọnụ ala.
Plain amị na-amị pedestal
Gear e mere
N'ịtụle ihe ndị chọrọ nkà na ụzụ chọrọ akụkụ, ya bụ, imepụta akụkụ kwesịrị ịtụle teknụzụ nhazi dị mkpa iji hụ na arụmọrụ achọrọ na izi ezi chọrọ, otu esi belata nsogbu nhazi, ọnụ ahịa ma melite arụpụtaghị ihe.
(1) Nhazi: maka akụkụ nwere akụrụngwa siri ike (ike, ike) na akụkụ ziri ezi na nkwụsi ike, dị ka gia, crankshafts, biarin na akụkụ nnyefe ndị ọzọ maka akụrụngwa akụrụngwa ma ọ bụ igwe ihe eji arụ ọrụ, nchara ma ọ bụ alloy alloy ahọrọkarị. The machining usoro bụ n'ibu ọnwụ.
(2). zọọ: maka akụkụ efere dị mkpa, dị ka arịa, shells, lampshades ma ọ bụ mpempe akwụkwọ, a na-ejikarị mpempe akwụkwọ ma ọ bụ stampụ eme ihe. Nkọwa nke teknụzụ nhazi a dị ala karịa nke ịcha, yabụ ọ dị mkpa ka a kpụzie akụkụ ụfọdụ nwere nkenke chọrọ.
(3) Die mgbatị: n'ihi na akụkụ ụfọdụ na mgbagwoju udi, tumadi na-abụghị ferrous metal akụkụ, dị ka engine shei, radiator na oriọna njide mere nke aluminum alloy, zinc alloy, magnesium alloy na ọla kọpa alloy, anwụ mgbatị ịkpụzi nwere ike ukwuu ịzọpụta ọnwụ ọnwụ ma nweta oke mmepụta ọnụego. Adabara otutu mmepụta.
(4) Nkà na ụzụ nhazi ndị ọzọ: extrusion metal kwesịrị ekwesị maka imepụta ihe profaịlụ profaịlụ nke nwere akụkụ obe mgbe niile, a na-ejikwa nsị ntụ na-emepụta ihe maka imepụta igwe anaghị agba nchara.
Mestech na-enye ndị ahịa atụmatụ OEM na nhazi nke akụkụ igwe. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla ma ọ bụ chọọ ozi ọzọ, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Plastic ngwaahịa imewe
Osote: Ebu ebu ígwè
Video ọnụ ụzọ rọba plastic ịkpụzi